Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka SanDisk Memory Card
Sidee ayaan soo kabsado photos in si qalad ah la tirtiro ama maqan on my kaadhka xusuusta SanDisk? Maxaa dhacaya haddii camera ayaa muujinaysa qalad iyo sawirrada ah oo dhan aan laga badiyay? Waxaan soo kaban karto, sawiro iyo videos aan marka SanDisk shilalka kaadhka xusuusta, joojiyo shaqeeyo ama waxaa la khilaafo?
Sida a user kaadhka xusuusta SanDisk, waxaad la kulmi karaan arrimaha aan kor ku xusnay. Marka ay dhacdo, kaliya ma niyad ahaan. Waxba ma ahan wixii dhibaatooyin aad uu aqrinayo, waxaa jira fursad ah in aad soo kaban karto sawiro kaararka xusuusta SanDisk, ilaa inta uu jiro wax qasaaro jirka kaarka, taas ayaana ku odhan, kaarka weli waxaa lagu ogaan karaa your computer laakiin uma shaqeeyo.
Marka photos yihiin laga badiyay ka kaadhka xusuusta SanDisk, ay si dhab ah uma tageen, laakiin in ay la arki karin. Waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in ay iska fogeeya oo aan joojiyo isticmaalkiisa si loo badbaadiyo files cusub ama qabsadaan sawiro cusub. Files New overwrite kartaa files lumay oo waxaan ka dhigi unrecoverable. Markaas ka heli qalab kabashada sawir lagu kalsoon yahay inay si fiican u soo kabasho kaadhka xusuusta SanDisk ugu dhaqso badan.
Sidee inuu ka soo kabsado sawiro ka kaadhka xusuusta SanDisk
Helitaanka SanDisk qalab kabashada sawir kaadhka xusuusta lagu kalsoonaan karo ay hubisaa in fursad fiican inuu ka soo kabsado sawirada kaadhka xusuusta SanDisk aad. Waa in aad hesho mid ka mid samaynayaan wixii sax ah sida ay sheegayaa website ka xirfadle. Haddii aadan helay mid ka mid ah weli, halkan aan soo jeediyo kuwa is-hoosaysiiya, Wondershare Photo Recovery (la jaan qaada Windows 8/7 / Vista / XP), ama Wondershare Photo Recovery for Mac .
Labada of software SanDisk kabashada kaadhka xusuusta waa 100% lagu kalsoonaan karo oo xirfadle ah. Waxaad soo kaban karto sawiro lumay, video iyo files audio, iyadoo aan loo eegayn aad tirtiray, formatted ama lumay ay sabab u tahay sababo aan la ogeyn, ka soo kaadhka xusuusta SanDisk, iyo sidoo kale nooca kale ee kaararka xusuusta. Buuxinta hawsha oo dhan oo kaliya u baahan tahay saddex tallaabo.
Step1 Connect aad kaadhka xusuusta SanDisk in kombiyuutarka
Qaado version Windows sida tusaale.
Tallaabada ugu horreysa waa in lagu xiro aad kaadhka xusuusta SanDisk in kombiyuutarka la akhristaha kaarka. Ama waxaad toos ah ku xidhi kartaa camera adiga oo aan qaadashada kaarka. Hab kasta, aad hubiso in lagu ogaan karaa your computer iyo muuqdaan sida warqad drive ah. Next, ordo sawir card kabashada software xasuusta SanDisk oo guji "Start" furmo suuqa hoose si ay u bilaabaan shaqadaada.
Step2 Scan sawiro laga badiyay aad kaadhka xusuusta SanDisk
Hadda dhaqaaqo talaabada labaad. Your kaadhka xusuusta SanDisk waxa lagu ogaan karaa barnaamijka iyo muuqdaan sida fllow. Waxaa Dooro oo guji "Scan" si aad u hesho sawirada lumay it on.
Step3 sawirada kulanka xiisaha iyo soo kabsado on kaadhka xusuusta SanDisk
Halkan, aan ka joogno arinta tallaabo la soo dhaafay hadda. Waxaad ku eegaan kartaa sawiro oo la helo waa ay barnaamijka si loo hubiyo tayada. Markaas calaamadee kuwa aad rabto oo guji "Ladnaansho" in ay iyaga oo dhan la badbaadiyo on your computer ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday aad kaadhka xusuusta SanDisk asalka ah. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.
Video tutorial ah Sandisk kabashada kaadhka xusuusta
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka SanDisk Memory Card